Same Impunity (MM) – Burmese Women's Union
Email : secretariat.bwu@gmail.com
Women’s Data Portal
Same Impunity (MM)
January 7, 2014 /in Reports /by BWUnion
Create Date January 7, 2014
http://burmesewomensunion.org/wp-content/uploads/2021/03/logo-tit-300x68-1.png00 BWUnion http://burmesewomensunion.org/wp-content/uploads/2021/03/logo-tit-300x68-1.png BWUnion2014-01-07 12:02:122021-04-07 12:03:32Same Impunity (MM)
Archives Select Month June 2021 May 2021 April 2021 March 2021 February 2021 August 2019 November 2018 November 2017 November 2016 July 2016 June 2016 April 2016 October 2015 August 2015 November 2014 September 2014 January 2014 January 2013 March 2012 February 2012 December 2011 March 2011 January 2011 May 2010 March 2010 January 2009 March 2007 September 2004 March 2002 March 2000 March 1999
Briefing Papers (7)
ကပ်ဘေးကြားက ဘဝခါးခါး July 29, 2021
“ ရောဂါကပ်ဘေးကြီး အမြန်ဆုံးပြီးစေချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးတွေနဲ့ စစ်ရေးတွေကိုလည်း အမြန်ဆုံးြငိမ်း ချမ်းစေချင်ပါပြီ အရင်ကလိုဈေးရောင်းကောင်းစေချင်ပါတယ်။ ကပ်ဘေးကြားထဲက ကျွန်မတို့လိုမုဆိုးမတွေရဲ့ ဘဝခါးခါး နေ့ရက်တွေကို အမြန်ဆုံး အဆုံးသတ်ခွင့်ရချင်ပါတယ် ။ ”
ပအိုဝ်းနှင့် ဓနုတိုင်းရင်းသားတို့၏ ဝါဆိုလပြည့်နေ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်မြင်ကွင်း July 28, 2021
ဗုဒ္ဓဘာသာအစဉ်အလာအရ နေ့ထူးနေ့မြတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဝါတွင်းသုံးလစဝင်ချိန် ဝါဆိုလပြည့်နေ့တွေဆိုရင် လည်း ဓနုတိုင်းရင်းသားနဲ့ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား လူပျို၊ အပျိုတွေက ဘုရားဆွမ်းကပ်ရန် နေအိမ်မှ ဘုန်းကြီးကျောင်းဆီသို့ စီတန်းလှည့်လည်ခဲ့ကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးများက မုန့်၊ ပန်းတွေနဲ့ ဘုရားဆွမ်းတော်ခွက်ထဲမှာ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ဆွမ်းတော်ပန်းကန်ကို အ‌ရှေ့ဘက်ကနေ ယူဆောင်လာရပြီး အမျိုးသားတွေကတော့ ရိုးရာ အိုးစည်၊ ဗုံမောင်း၊ ဝါးလက်ခုပ်၊ စတဲ့ ရိုးရာသံစဉ်မျိုးစုံဖြင့် တီးမှုတ်ကာ ပျော်ရွှင်စွာဖြင့်နေ့ထူးနေ့မြတ်လေးကို ဖြတ်သန်းလေ့ ရှိကြပါတယ်။
ကိုယ့်မိသားစုဝင် တစ်ဦးကိုမှ အပဲ့မခံနိုင်တဲ့ အိမ်ရှင်မတွေ July 27, 2021
မိသားစုတွေမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်နာမကျန်းဖြစ်ရင် ပင်ပန်းရတာ အိမ်ရှင်မ တာဝန်ယူထားတဲ့ မိခင်တွေ ၊ဇနီးတွေ ၊သမီး တွေပါ။ ဖျားနာနေတဲ့ အိမ်သားကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရတာ၊ အဟာရပြည့်ဝပြီး ခံတွင်းတွေ့စေမဲ့ အစားစာတွေ ချက်ပြုတ် ကျွေးမွေးရတာ၊ လျှော်ဖွတ်သန့်ရှင်းရတာတွေကလည်း အိမ်ရှင်မတွေပါပဲ။ တချို့အိမ်ရှင်မတွေဆို အိမ်အတွက် ဝင်ငွေ ရှာဖွေတာလည်းမပြတ်စေဘဲ တဖက်က အိမ်သားတွေ ကို ပြုစုရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကိုဗစ်ဖြစ်ပွားတဲ့အခါမှာလည်း အိမ်မှာတစ်ယောက်ဖြစ်ရင် တစ်မိသားစုလုံး ကူးစက်နိုင်တယ်ဆိုတာသိပေမဲ့ နာမကျန်းတဲ့ အိမ်သားကို မျက်နှာမလွှဲဘဲ ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေး၊ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေး၊ လိုအပ်တာ တကိုယ်တည်းထွက်ဝယ်ရပြီး အိမ်မှာ အောက်ဆီဂျင်လိုတယ်ဆို ညအချိန်မတော် နေရာပေါင်းစုံသွား အောက်ဆီဂျင်အရှာထွက်ရတဲ့ ရဲရင့်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေလည်း အများအပြားပါ။
တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ကုသရေးလုပ်မယ့် CTF July 26, 2021
“ကိုဗစ် Task Force ကတော့ အမျိုးသမီးအတွက်ဆိုပြီး လက်ရှိသီးသန့်ရှိသေးမှာမဟုတ်သေးပါဘူး။ တင်ပြမှုအပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ တချို့သောအမျိုးသမီးတွေ သူ့ဒေသကနေ ခရီးသွားလာမှု၊ စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စောင့်ရှောက်မှုပဲဖြစ်ဖြစ် အခက်အခဲတွေတော့ ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေကို ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းမသွားနိုင်ရင် အိမ်မှာ လက်သည်နဲ့မွေးတာဖြစ်ဖြစ်၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရှိရာကို သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မွေးဖွားဖို့ ပစ္စည်းကရိယာတွေ အဆင့်သင့်ဖြစ်အောင်၊ အဝတ်အစားတွေ၊ လက်အိတ်တွေကအစ အဲဒါလေးတွေတော့ ထောက်ပံ့တဲ့အစီအစဉ်တော့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ ကိုဗစ်အစီအစဉ်နဲ့တော့ တိုက်ရိုက်မဟုတ်ပါဘူး။”
“သူတို့က ဖိနှိပ်လေလေ ကျမတို့ ပိုအားသန်လာလေ ဘယ်တော့မှ စိတ်ဓါတ်ကျမသွားဘူး” July 25, 2021
“အမျိုးသမီးဝန်ကြီးဌာနဖွဲ့ထားတာ သုံးလကျော်အတွင်းမှာ ထုတ်ပြန်ချက်တစောင်ပဲထုတ်တယ်။ ဒီလိင်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက် လို့ပေါ့။ ကျမတို့ဖြစ်စေချင်တာက ဒီအပေါ်မှာသူတို့အင်တိုက်အားတိုက်ဘယ်လိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာမျိုး ဥပမာ ဘယ်မှာ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကျူးလွန်ခံနေရတယ်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုရင်လည်း ဘယ်အခြေအနေရောက်ပြီပေါ့။”
Twenty Five Years later BWU is still on the frontline in the fight for women’s rights and democracy in Burma. join us in the peace making process.
Facebook : https://www.facebook.com/burmesewomensunion
© Copyright - Burmese Women's Union
Same Impunity SYSTEM OF IMPUNITY